Tani waa jir ah dugsiga xarrago Yurub la saqafka sare, rakiban Brasserie, darbiyada muraayadda ah, iyo adeegayaasha dharka rasmiga ah u labisan.
dukaan kafeega A isticmaalo-u waxyoonay ee Paris waa waxa lagu siiyo marka Australiyaanka ah iyo Frenchie bilowdo dukaan kafeega ah, mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee dhaqanka-u-caadeysan adduunka. Waxa ay taasi sare on liiska dukaamada qaxwada our ugu fiican Yurub.
Thanks to goobaha sida Mok, Brussels waxay kasbanaysaa booskeeda dukaamada ugu fiican ee qaxwada ee khariidada Yurub.
Iyaga ayaa dubta digirta qaxwada lafteeda taas oo u tarjumeysa inay yihiin kuwa ugu tayada sareeya.
Waxaa lagu tilmaamaa tiyaatarka kafeega. Waxaa xaqiiqo ah ayaa meel on Dukaamada ugu fiican ee liiska Europe. Tani waa meel xaflad ah dhaqan qaxwada iyo waxay leedahay qol dhadhankiisu la Roastery a state-of-the-art. Ka fikir Willy Wonka kulmay kafeega.
In Edinburgh, the Lab Brew is on-trend waana mid ka mid ah dukaamada ugu wanaagsan ee qaxwada Yurub.
Astaamida Brew Lab waxay leedahay dad garaacaya albaabadooda wax badan. Ay menu kafeega waxa ay markhaati u ay hamiday.
Waxaa qoreysa afar qoqobada bunka-hal asal ahaan. Laba ayaa brewed ay bar diyaarid iyo labada kale ay espresso bar. nooeyada Coffee la raaxaystay ayaa la cake ama la dubo, oo Lab dhiga leeyahay yaraanta lahayn.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Maqaayadaha Best Waayo The Best Coffee In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-cafes-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)